Ny Famolavolana Ny
Ny Famolavolana Ny Studds Accessories Ltd no mpanamboatra fiarovan-dàlana sy kodiarana roa vita amin'ny kodiarana. Ny fiarovan-dàlana amin'ny Studds dia amidy amin'ny alàlan'ny marika marika marobe. Noho izany dia ilaina ny manangana famantarana momba izany. D'art namboarina ho an'ny fivarotana, manasongadina ireo teboka mampihetsi-po mahaliana toy ny Virtual zava-misy ireo vokatra, ny latabatra fampisehoana fampitaovana fifandraisana sy ny milina fanadiovana sns .. Nandinika ny fivarotana fiarovan-doha sy ny kojakoja, nisintona mpivarotra marobe, nanao ny fivarotana fivarotana ho amin'ny ambaratonga manaraka.
Ny Kafe Anatiny Dia Endrika Ny mpanjifa dia mitana foibe any Japon miaraka amin'ny fivarotana marika fivarotana 1 300-bodo, ary i Dough dia marika amin'ny kafe vao havaozina ary izy no mpivarotra voalohany hanao fanokafana goavana. Nasongadinay ny hery izay azon'ny mpanjifanay manome taratra azy ireo ao anatin'ireo famolavolana. Ny fitrandrahana ny tanjaky ny mpanjifantsika, iray amin'ireo toetra voalohany mampiavaka ity kafe ity dia ny fifandraisan'ny mpivarotra fividianana sy ny lakozia. Amin'ny alàlan'ny fametrahana rindrina sy am-baravarankely voalanjalanja, tsara ny mpanjifanay amin'ity fomba fiasa ity, dia hahatonga ny mpanjifany hihamaosa.
Trano Fisakafoanana Noraisinay ny famolavolana hoe "famoronana sy fanamboarana" ao amin'ity hotely ity. Mba hampandehanana toeram-pisakafoanana marobe, dia sarobidy ny mampiasa kojakoja vita amin'ny proteina tsara. Ohatra, ny endrika vita amin'ny arisitera mampitohy ny tsanganana ary ny valin-drihana dia ho lasa ampahany iray amin'ny famolavolana ary azo antoka fa handeha tsara mihoatra ny dabilio na ny fantsom-baravarana. Mazava ho azy fa io dia tsy azo ampiasaina fotsiny amin'ny fizarana ny rivotra. Raha ny tokony ho izy, trano fisakafoanana telo hafa no efa vita, ary io "famoronana manapetaka-tsofina" io dia nahitana vokatra mahasoa.
Coca-Cola Tet 2014 Karazana Fonosana Malefaka Asabotsy 19 Jona
5 Elemente Ny Marika Divay Zoma 18 Jona
Calendar 2014 “Botanical Life” Ny Kalandrie Alakamisy 17 Jona
Ny Famolavolana Ny Ny Kafe Anatiny Dia Endrika Ny Kafe Anatiny Dia Endrika Ny Trano Fisakafoanana Trano Fisakafoanana Trano Fisakafoanana